Qaphela - I-Google Search Console Iziba I-Longtail Yakho | Martech Zone
Sithole enye inkinga ehlukile izolo lapho sibukeza ukusebenza kwamakhasimende ethu okusesha injini. Ngithumele futhi ngabukeza okuvelayo futhi ngachofoza idatha kusuka Amathuluzi we-Google Search Console futhi ngaphawula ukuthi kwakungekho ukubalwa okuphansi, kuphela amaqanda kanye nokubala okukhulu.
Eqinisweni, ukube ubuzokholwa yiGoogle Abaphathi beWebhu idatha, imigomo emikhulu kuphela eyayishayela ithrafikhi kwakuyigama lomkhiqizo namagama ancintisanayo kakhulu iklayenti elibekwe kuwo. Kunenkinga, noma kunjalo. I-Google Ama-Analytics idatha yamagama angukhiye ifakazela okuphambene .. ukuthi iningi le-traffic search engine livela kumagama angukhiye we-longtail.
Kufanele ufunde ukuphrinta okuhle ngaphakathi kwe-Google Search Console Imibuzo yosesho isihloko sokuthola ukuthi kwenzekani:
Okuvelayo: Inani lamakhasi asikhathi kusuka kusayithi lakho avele emiphumeleni yosesho, futhi amaphesenti akhuphuka / ancipha emibonweni emaphakathi yansuku zonke ngokuqhathaniswa nesikhathi esedlule. Inani lezinsuku ngokwesikhathi elizenzakalelayo liye ku-30, kepha ungakushintsha nganoma yisiphi isikhathi. (Lezi zinombolo zingahlanganiswa, futhi kungenzeka zingabi ngqo.)
Ukuchofoza: Inani lezikhathi umsebenzisi achofoze ngazo uhlu lwakho lwesayithi emiphumeleni yokusesha yombuzo othile, namaphesenti akhuphuka / ancipha ekuchofozeni okujwayelekile kwansuku zonke ngokuqhathaniswa nesikhathi esedlule. (Lezi zinombolo zingahlanganiswa, futhi kungenzeka zingabi ngqo.)
Kunjalo ... Abaphathi beWebhu baqoqa ukubalwa okuphansi kokuvelayo KANYE nokuchofoza, kunikeza kuphela ukubalwa kwamavolumu amakhulu kuphela. Lokhu kuyathuthuka impela uma unikezwa iqiniso lokuthi amagama angukhiye we-longtail angashayela okuvelayo nokuchofoza okuhambisana kakhulu! Eqinisweni, ekuhlaziyweni esikwenze esikhathini esingaphezu konyaka esedlule kule bhulogi, iningi lazo zonke izimoto zethu eziphilayo zazivela ku-longtail.
Ngakho-ke, njengakwezinto eziningi zokusesha eziphilayo, qaphela ukuthembela kumthombo owodwa. Kuyishwa ukuthi i-Google ayikwazi ukunikezela ngemininingwane yangempela kuma-Webmasters, ngikholwa ukuthi kungasiza abantu ukuthi bayeke ukugxila kumagama angukhiye ancintisana kakhulu futhi bakhe amasu wokuthengisa wokuqukethwe ahlelwe kahle.
Tags: Amathuluzi we-google webmasterabaphathi bewebhu be-googlegwtumsila omudeamagama angukhiye we-longtail
Imiphumela Yokuhlola Ukubizelwa Esenzweni nge I-Hubspot
Amathiphu Wokugwema Intukuthelo Yomkhiqizo ngecebo lakho le-imeyili
Jan 16, 2013 ngo-2: 15 PM
Okuthunyelwe okuhle, Doug! Ukuziphatha kwendaba, ungathembeli kumthombo owodwa weqiniso ukuqoqa idatha yakho. Noma lowo mthombo uyi-Google 🙂
Jan 16, 2013 ngo-3: 56 PM
Impela, @ twitter-16113225: disqus!